ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကြောင့် ပရိတ်သက်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေခံနေရတဲ့ပြန်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး – Cele Snap
ဖြူဖြူထွေးကတော့ကိုယ်ပိုင်စိတ် ကူးလေးတွေနဲ့ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူးပြီးပရိသတ်အချစ်တွေကို ရယူထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်. . ဖြူဖြူထွေးကတော့ မိသားစုလိုက် ရိုးသားဖြူစင်ခြင်းတွေနဲ့အတူ အလှူအတန်းတေ့လည်း ရက်ရောတယ်ဆိုပြီးတော့ ပရိသတ်များကလည်း ချစ်ပေးခဲ့ကြပြန်ပါ တယ်။ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်နေတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာတော့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်. ..
အနုပညာရှင်တော်တော်များများလည်း တရားသောဘက်နှင့် မတရားသောဘက်ကို လူသားချင်းသိတတ်စွာဖြင့် သိတတ်ခဲ့ကြပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရပ်တည်ခဲ့ကြပေမဲ့ အဲထဲမှာ ဖြူဖြူထွေးကတော့တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ မကြာမှီရက်တစ်ရက်မှာတော့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် ပြည်သူတွေ အတွက် အအေးဗူးတွေ ထွက်ပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သူမအပေါ်မှာ ချစ်တဲ့အချစ်တွေအစား ဝေဖန်မှုတွေသာ တိုးနေခဲ့ပြန်ပါ တယ်။
ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေရင်းနဲ့ပဲ ရန်ကုန်မှာဆက်လက်နေထိုင်ရင်း မကြာခင်မှာတော့ သူမတို့နေထိုင်တဲ့ နယ်ကိုပဲ ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီး ပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အားလုံးကို လွမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကလည်း တင်လာခဲ့ပြီးနောက် အလှူအတန်းဆို ရက်ရောတတ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက်ကတော့ သူမ တတ် နိုင်သလောက် လှူဒါန်းမှုလေးတွေတော့ အမြဲပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
ဒီနေ့လေးမှာတော့ ဖြူဖြူထွေးက ” ဒီနှစ် သတင်းကျွတ်လေးကတော့ မိသားစုရှိရာမွေးရပ်မြေလေး ဆီသို့အပြန် လမ်းကအမျိုးများနဲ့တွေ့ စဉ်က ဘာလေးလှူရလှူရ 🙏🙏🙏 ” ဆိုပြီး ဗီဒီယိုလေး တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. သူမ တင်လာတဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာတော့ အရင်လိုပဲ လှူတဲ့နေရာမှာ ကင်မရာတွေကိုအိမ်မှာပဲ ထားခဲ့သူဆိုတဲ့သူနဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ မြှင့်တက်နေခဲ့ပါတယ်နော်… ပရိသတ်ကြီးလည်း ဖြူဖြူထွေးရဲ့အလှူလေးကို သာဓုခေါ်ပေးကြပါ အုံးနော်…
ဖွူဖွူထှေးကတော့ကိုယျပိုငျစိတျ ကူးလေးတှနေဲ့ကွျောငွာတှကေို ရိုကျကူးပွီးပရိသတျအခဈြတှကေို ရယူထားနိုငျသူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ. . ဖွူဖွူထှေးကတော့ မိသားစုလိုကျ ရိုးသားဖွူစငျခွငျးတှနေဲ့အတူ အလှူအတနျးတလေ့ညျး ရကျရောတယျဆိုပွီးတော့ ပရိသတျမြားကလညျး ခဈြပေးခဲ့ကွပွနျပါတယျ။ နိုငျငံရေးမတညျငွိမျနေ တဲ့ အခြိနျကာလအတှငျးမှာတော့ ဖွူဖွူထှေးတဈယောကျ တိတျဆိတျငွိမျသကျနခေဲ့ပွနျပါတ ယျ. ..
အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြားလညျး တရားသောဘကျနှငျ့ မတရားသောဘကျကို လူသားခငျြးသိတတျစှာဖွငျ့ သိတတျခဲ့ကွပွီး ပွညျသူလူထုနဲ့အတူ ရပျတညျခဲ့ကွပမေဲ့ အဲထဲမှာ ဖွူဖွူထှေးကတော့တိတျဆိတျနခေဲ့ပွနျပါတယျ။ မကွာမှီရကျတဈရကျမှာတော့ ဖွူဖွူထှေးတဈယောကျ ပွညျသူတှေ အတှကျ အအေးဗူးတှေ ထှကျပွီးကမျးလှမျးခဲ့ပမေဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ သူမအပျေါမှာ ခဈြတဲ့အခဈြတှအေစား ဝဖေနျမှုတှသော တိုးနခေဲ့ပွနျပါ တယျ။
ဝဖေနျမှုတှေ ခံနရေငျးနဲ့ပဲ ရနျကုနျမှာဆကျလကျနထေိုငျရငျး မကွာခငျမှာတော့ သူမတို့နထေိုငျတဲ့ နယျကိုပဲ ပွနျတော့မယျဆိုပွီး ပွနျသှားပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ အားလုံးကို လှမျးနတေယျဆိုတဲ့အကွောငျးတှကေလညျး တငျလာခဲ့ပွီးနောကျ အလှူအတနျးဆို ရကျရောတတျတဲ့ ဖွူဖွူထှေး တဈယောကျက တော့ သူမ တတျနိုငျသလောကျ လှူဒါနျးမှုလေးတှတေော့ အမွဲပွုလုပျလကျြရှိပါတယျ။
ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ဖွူဖွူထှေးက ” ဒီနှဈ သတငျးကြှတျလေးကတော့ မိသားစုရှိရာမှေးရပျမွလေေး ဆီသို့အပွနျ လမျးကအမြိုးမြားနဲ့တှေ့ စဉျက ဘာလေးလှူရလှူရ 🙏🙏🙏 ” ဆိုပွီး ဗီဒီယိုလေး တငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျနျော.. သူမ တငျလာတဲ့ဗီဒီယိုအောကျမှာတော့ အရငျလိုပဲ လှူတဲ့နရောမှာ ကငျမရာတှကေိုအိမျမှာပဲ ထားခဲ့သူဆိုတဲ့သူနဲ့ ဝဖေနျမှုတှေ မွှငျ့တကျနခေဲ့ပါတယျနျော… ပရိသတျကွီးလညျး ဖွူဖွူထှေးရဲ့အလှူလေးကို သာဓုချေါပေးကွပါအုံးနျော…